‘कुदायो, खतरनाक भन्छन्, नकुदायो लोसे भन्छन्’
अभिषेक पौडेल, चालक, काठमाडौँ–जाजरकोट, ना ७ ख २०६०।
मेरो घर सुर्खेत हो। ड्राइभिङ पेशामा लागेको ११ वर्ष भयो। सानैदेखि गाडी चलाउने रहर थियो। त्यसैले चालक बनेँ। एसएलसी पास गरेको छु। त्यसपछि पढ्न मन लागेन। गाडी चलाउनै रमाइलो लाग्न थाल्यो। अरू काममा त्यति मन गएन। दुईतीन वर्ष सहचालक भएर काम गरेँ। त्यसपछि मात्र चालक बन्न पाइयो। काठमााडाँैबाट जाजरकोट पुग्न २५ घण्टा लाग्छ। जाम पर्‍यो भने २८–२९ घण्टा पनि लाग्ने गर्छ।
सधैँ सहचालकका रूपमा काम गरेर दिक्क भइसकेको थिएँ। ड्राइभिङ गाडीको गुरुजीले नै सिकाइदिनुभयो। ड्राइभिङको पहिलो दिन असाध्यै खुशी भएको थिएँ। यात्रु बोकेर हिँड्दा दंग थिएँ। अलि–अलि डर पनि लागेको थियो। ‘केही हुने पो हो कि’ भनेर अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। तर, ड्राइभिङ सिकाउने गुरुजी सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले ढुक्क थिएँ।
अनेक किसिमका प्यासेन्जर
यात्रामा अनेक थरी यात्री भेटिन्छन्। कोही–कोही त जाम पर्दा पनि हामीसँग रिसाउँछन्। कति न हामीले जाम पारेजस्तो ! कोही सिट भएन भन्छन्, कोही गीतका लागि कराउँछन्। स्पिडमा गाडी चलाउँदा खतरनाक ड्राइभर भन्छन्, खराब बाटोमा बिस्तारै चलायो भने लोसे ड्राइभर भन्छन्। हामीले त जे गरी पनि सुख छैन।
गुरुजीको कसैले सम्मान गर्दैनन्। कतिले त रिस पोख्ने भाँडो ठान्छन्। गाडीबाट झरिसकेपछि ‘ड्राइभर–खलासी कामै नलाग्ने’ जस्ता वाक्य कतिपय प्यासेन्जरको मुखबाट सुनेको छु। यस्तो कुराले चित्त दुखाउँछ।
गाडी रिजर्भ हुँदा खुशी हुन्छु। विभिन्न ठाउँ घुम्न पाइन्छ। रिजर्भमा पोखरा, लुम्बिनी, इलामलगायत ठाउँ धेरै पटक पुगिसकेँ। चालक भएपछि आफूखुशी हिँड्न पाइँदैन। बिदा लिन मिल्दैन। तर, रिजर्भमा भने घुम्न पाइन्छ। यसलाई म रिफ्रेसमेन्टका रूपमा लिन्छु। त्यसैले गाडी रिजर्भ हुँदा रमाइलो लाग्छ।
घरको यादले सताउँछ
पेशा नै यस्तो छ, घर कमै जान पाइन्छ। गए पनि एक दिन बसेर फर्किनुपर्ने हुन्छ। चाडपर्वको बेलामा त झन् घर जान पाइँदैन। त्यतिखेर घरको यादले सताउने गर्छ। गाडी चालकले चाडपर्वका बेला धेरैलाई उनीहरूका घर पुर्‍याउँछन्। तर, आफू भने जान पाउँदैनन्। साह्रै दुःख लाग्छ। फेरि आफूले नै रोजेको पेशा भएकाले कसैसँग गुनासो पनि गर्न मिलेन। यसै चित्त बुझाउँछु। पर्वमा गाडी थन्काए कमाउने कति खेर? हामीले कमाउने भनेकै चाडपर्वमा हो।